द्वन्द्वको घाउ र जनयुद्ध दिवस | Kendrabindu Nepal Online News
738562 35006 547239 156317
द्वन्द्वको घाउ र जनयुद्ध दिवस
१ फाल्गुन २०७६, बिहीबार १६:५५
‘जनयुद्ध दिवस’ को सम्झनामा त्याग र बलिदानीका गर्वान्वित वीर रसयुक्त वाणी बोलिनु एक हदमा सार्थक देखिन्छ । युद्ध गर्नु रहर होइन बाध्यता पनि हुन सक्छ । आफू सही र हिजोको खराबीको तर्क भिरेर आफूमैत्री व्याख्या गर्दा मात्र उपलब्धि हो भन्न सकिएला त !
केवल विसङ्गतिको एउटा आभाले पोल्छ जुन केही भएका उपलब्धिलाई छोपिदिने कारक बनेका हुन् । द्वन्द्वको नेतृत्व गर्ने हिजोको समूह नै आज क्रान्ति नै नगरेका व्यक्ति जसरी नै आ–आफ्ना झोली झ्याम्टा बोकेर दगुरेका छन् । सबैलाई नेता नै बन्नु परेको छ । मौरीका राना धेरै हुँदा छुट्टिएर जसरी बाँडिँदा हिजोको त्याग बाँडियो, जनताको विश्वास र अभिलासा चुँडियो । जनतामा घात गरियो– अहँ यो कुरा त सर्लक्कै ढाकछोप हुन्छ तब मानवीय संवेदनामा हतौडा प्रहार हुन्छ ।
शान्तिभूमि नेपालमा रगतका खोलाको होली खेलेर सानो सुखी संसारलाई बलात्कार गरेपछि चुपचाप बसेका एक दर्जन बढी सालहरूमा कति आँसु बगेका होलान्, उपलब्धिका पछाडि गुमाएका गुमनामले प्रश्न गरिरहन्छ । आजसम्मका हरेक उपलब्धिलाई युद्धका डोराले बाँधेर राखेको छ । तर, हरेक सफलतालाई एकता र समझदारीले नै निर्णायक भूमिका प्रदान गरेको हुन्छ । माओवादीले सङ्घर्ष गर्यो, केही पाएको त छ तर धेरै गुमायो । किनकी हिंसात्मक युद्धले ल्याएका खुशी सबैको हितमा हुँदैनन् । त्यसमा पनि नेपाल त क्रान्तिभूमि स्वाभिमानका लागि हो तर यो त पवित्र शान्तिभूमि पनि त हो ।
बिर्सनुहुन्छ त– हिजो जनताको बिचल्ली भएको थिएन र ? – लुकाएर बिर्सन पनि त मिल्दैन । तत्कालीन माओवादीले आफ्नै कार्यकालमा पनि बेपत्ता पारिएका, अन्यायमा परेका नेपाली जनताको पीडाको सम्बोधन हुने मार्गले चित्तबुझ्दो स्थान ओगटेन । धेरैले विनाकारण पनि जोखिम मोल्न सकेनन् । हो, केही पाउन थुप्रै गुम्यो तर जनताले अभैm विगतभन्दा बढी भ्रष्ट्राचारको लप्का व्यहोरिरहनु परेको छ । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गरेको पार्टीभित्रका उच्च ओहोदा ओगटेका व्यक्तित्वले नै सर्वहारा वर्गकै पसिना चुस्न आनाकानी गरेन– इतिहास साक्षी छ । परिवर्तन के हो ? आज पनि जनता ओढारमा बस्छन् । भिरमा खोस्रेर मकै रोप्छन् तर तीन महिना खान पुग्ने अन्न घरमा हुँदैन । सत्य हो– हिमाली क्षेत्रमा जनताको पीडा उस्तै छ नियाल्दा ।
नेता त जतातिर बटारिए पनि नेतै छन् तर ती हिजो समर्पित जनताको अवस्था के छ ?सरकारले माओवादीबाट मारिएका १ हजार ३४ सेना, १ हजार ४ सय ९४ प्रहरी तथा ३ सय ७ सशस्त्र प्रहरीका परिवारलाई जनही १० लाख रुपैयाँ राहत दिने घोषणा पनि ग¥यो । माओवादी पक्षका सहिद परिवारलाई १० लाख दिइयो पनि । यही द्वन्द्वकालीन दश वर्षमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालयका अनुसार सुरक्षाकर्मी, लडाकु र सर्वसाधारण समेत १७ हजार ८ सय ८६ जना मारिए, १ हजार ७ सय ३० नेपालीले वेपत्ता हुनुप¥यो अर्थात् १९ हजार ६ सय १६ जनाको मानवीय क्षति गराइयो । आखिर नेपाली दाजुभाइद्वारा नेपाली मारिए, नेपालीलाई बेपत्ता पारिए । तत्कालीन सङ्घर्षरत माओवादीले दिएको त्रासका कारण करिब डेढ लाख मानिसले विस्थापित बन्नुपर्यो ।
वास्तवमा द्वन्द्वकालका कारणले शहरीकरण बढ्यो । धेरै मानिस सुरक्षाका लागि शहरतिर कोचिएर बसे अनि गाउँ फर्केनन् । अर्कोतिर नेपालको ३८ अर्ब, ३३ करोड, १२ लाख ५० हजार रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षतिको तथ्याङ्क भए पनि व्यक्तिगत र सरकारी सम्पत्ति, सवारी साधनको क्षतिको यकिन विवरण छैन । तर, पीडित परिवारको घाउमा मलम गर्न कुनै निकायले दैलोमा जाने आँट र सोच राखेको छ त ?
सोच्नुपर्छ: द्वन्द्वकालमा कैयौँ हत्या भए, अपहरण गरिएका छन्, बलात्कारजस्ता कुत्सित दानवीय व्यवहार भए । शारीरिक, मानसिक, भौतिक सबै खाले प्रहार भए । अत्याचारको चरम उत्कर्षका कारण निरीह, निर्दोष जनताले पीडाको कहालीलाग्दा वेदनामा मुछिइरहेका तथ्य छन् । दशौँ वर्ष त्रसित देशलेआज पाएको उपलब्धिभित्र के गर्व मात्र गरिरहेको होला?कयौँ नेपालीका सिन्दुर पुछिए, काख रित्तिए दुनियाँले युद्धले ल्याएको प्राप्तिमा गर्व गरि नै रह्यो, अलिकति खुसीमा चरक्क चिरिएको छातिले सरापिरह्यो ।
आज पनि सराप्दै छ, त्यो व्यक्ति जसले आफ्नो बाबाको तस्विरलाई हेरेर मझेरीमा कुरेको कुरा बल्झाइरहन्छ । आमाको लासमा रगतपच्छे पारेर नारा घन्काएको ध्वनिलाई सम्झिरहन्छ । कैयौँ आमाले सन्तान वियोगको मलीन आवाजको विलौनासँगै प्राण छोडिसकेका होलान् । अनेक विषयमा आशा भिराएर झुलाइएका छन्, विकासको मार्ग गफमा खुलेको छ तर देशले राजनैतिक सोचलाई बदल्न सकेको लाग्दैन । घरको सदस्य बेपत्ता भएको परिवार रोइरह्यो, आशा बोक्यो तर हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भइरह्यो । कति पाउनेले राहत पाए, कतिले नपाए पनि हुनेहरू रमाए त धेरै जनता हार खाएर बसिरहेकै छन्, सबैलाई थाहा भएकै विषय हो ।
वर्षेनी घुमेर आउने ती पापी चाडबाडमा चिरिएका छातिलाई कसले न्याय दिन सक्यो । कहाँ दुख्छ घाउ, त्यो अचानाको पिर खुकुरीलाई थाहा हुने अवस्थै छैन । निरीहका छातिमाथि टेकेर सत्तामा बस्दै डुक्रिएका आवाजसँग के शान्तिका बाटिकामा फूल्न सक्ने सुगन्ध फैलिएको होला ? त्यसका पछाडि भइरहेका रोदन, वेदना र त्यो निरीह चित्कारलाई कसले नियालेको छ र ?कति स्कुले बच्चाले पढ्न पाएनन्, कैयौँको जायजेथोमा अत्याचार गरियो, कैयौँ सुत्केरीले मृत्यु शयामा प्राण आहुति दिए, कतिले पालैसँग बलात्कार गरे, रगतपछ्छे लासमाथि बलात्कार गर्ने पाशविकतामा कुन हृदय भक्कानिएको होला । तसर्थ युद्धले पीडाकै आगो बाल्छ, शान्तिले शान्तिकै बिउलाई फलाउँछ ।
तीतो सत्य हो–कतिको व्यापार गुम्यो, जायजेथोलाई सर्वनाश गरियो । चाहे त्यो राज्य पक्षबाट भयो या त द्वन्द्वकालीन माओवादीबाट भयो तर त्यो भएकै हो । आज जबर्जस्ती बिर्साइए पनि टाउकाको मोल तोकिए तर यस्ता भयानक युद्धसँग मात्रै परिवर्तनको खुबी अड्केको अवश्य होइन रहेछ, समयले सिकाउँदैछ ।
न्याय व्यवस्थापन गर्न गठित आयोगले त कानुनी मानवीय आधारलाई केलाउला तर संवेदनाभित्र पसेर नियाल्न पीडितको आजको अवस्थालाई हेरिनुपर्छ । किनकी आज त अझ न्यायालयलाई शक्ति र ओहोदाको कालो बादलले ढाकेर न्यायको टोकरीमा स्वार्थ, झुट र निरङ्कुश अमानवीय गुणका विषाक्त फलहरू सजिएका तीता सत्य छन् । समस्यामा मलमपट्टि लगाउनैका लागि बेपत्ता आयोग बने तर ती मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनालाई छानबिन गर्न नसकेका तीता सत्यले पछ्याएकै छन् । संक्रमणकालीन न्याय व्यवस्थापनलाई कछुवा गतिमा हिँडाएर आँखामा छारो हालिएका वेदनामा उपलब्धिका कुराले नाक फुलाइनुमा कुनै अर्थ रहला र । आजसम्म कतिले शान्ति पाए, गम्भिर विषय छ । न्याय र अन्यायको आगो कसरी बल्दै छ त्यो भोग्नेले बोध गर्छ ।
मानव अधिकार उल्लङ्घनका कैयौँ घटनामा शक्ति र सामर्थ्यको तानाशाही दबाब भएका पीडितका गुनासा खोलाका गीत बनिरहनु लज्जास्पद विषय हुन् । उपलब्धिलाई पोल्टामा राखेर सबैजसो पार्टीले आफू क्रान्तिकारी, परिवर्तनकारी, जनमुखी भएको घोषणापत्र बोकेर घरदैलोमा भोटको भिख माग्न पुगे तर ती गुनासा कहाँ अड्किए थाहा छैन ।
पीडकको पहिचान र पीडितलाई न्याय दिने कानुनको दर्बिलो आधारमा देशको उच्च वर्गले कानमा तेल हालेर बस्दा आज भनिएका लोकतन्त्र, गणतन्त्रका उपलब्धिलाई गम्भिर भएर विश्लेषण गर्ने बेला आएको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले सर्वोच्चको आदेशानुसार ऐन संशोधन नभएसम्मका लागि आयोगलाई मान्यता नदिनुका साथै सहयोग नगर्ने विज्ञप्ति दिएको पनि थियो । फेरि एउटा अचम्मको विषय सरकार किन जागरुक बन्न सकेन ?आखिर दोषी कसरी पत्ता लाग्ने हो अनि त्यसका लागि कानुन के बनेको छ, कारबाही कसरी हुन्छ ? के यस विषयमा पनि पार्टीले दोषीलाई काँध हालेर पीडितलाई मुर्गा बनाउने खेल रच्ने त होइन?
तर, कतिपय विस्तृत छानबिन भएका विषयमा समेत् उचित कानुन नहुँदा सोधपुछ गर्ने स्थिति समेत् नरहनु दुःखद् र लज्जास्पद विषय बनेको छ । बेपत्ता बनाइने कार्यको अपराधिकरण बनाइनेसम्मका विषय नहुनु पीडाप्रद पक्ष हो । हिजो जानाजान या अनजानमा भएका कमजोरीलाई अब पनि कुनै सरोकारवालाले ढोकर बस्नु न्यायसङ्गत हुन सक्दैन । पीडितका गुनासासँग हातेमालो गर्ने स्थितिको अभाव हुनुको पछाडि असंवेदनाको पराकाष्ठा भेटिन्छ ।
आज देखिएका र भन्दै आएका उपलब्धिमा बाठाले नै फाइदा लिए तर कमसेकम मर्ने त मरिगए बाँचेकाहरूको आवाजमा आँसुमा होली खेलिनुहुन्न । ती सबै हाम्रै नेपाली सन्तति हुन् । युद्धले पोलेको घाउमा मलम लगाइनु आवश्यक छ । तिनका आवाज खोलाको गीत नबनून् । यस्तो गम्भिर विषयलाई सम्बोधन गर्नु आजको अवस्थामा सरकार र सरोकारको दायित्व हो । यसो नहुँदा यो देशले पाएको सिङ्गो उपलब्धिलाई उपहास गरे सरह हुन्छ भन्दा फरक नपर्ला ।
जनयुद्ध दिवस, द्वन्द्वको घाउ
Prevसप्तकोशीको जेट बोट अनिश्चितकालका लागि बन्द
चन्द समूहका प्रदेश-१ कमिटी ब्यूरो सदस्य पक्राउNext
ओली पहिलो पटक ‘जनयुद्ध’ दिवसमा सहभागी हुने
जनयुद्ध दिवस पार्टीलाई मान्य हुनै सक्दैन- माधव नेपाल